Inyani eyiyo malunga nokuThengiswa kweFanele yakho | Martech Zone
NgoMvulo, Februwari 17, 2014 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 UJenn Lisak Golding
Okokuqala, siyabathanda abaxhasi bethu Iphepha lokwabelana, abenze amandla ethu ilayibrari yezixhobo ngawo onke amaphepha emhlophe nabaxhasi bethu babaxhasi. Ndineblast yokusebenza kule infographic nabo.
Ngexesha lale nkqubo, saye saphonononga ukuba kutheni ukuthengisa umxholo kungasekho kwijelo elinye lentengiso; sisiseko esinika amandla yonke imizamo yentengiso. Kutheni usenokubuza? Ewe, le statistic inakho okanye ingakothusi. Ngoku ka Izigqibo zikaSirius:
Abathengi be-B2B banxibelelana nomthengisi kuphela emva kwe-70% yesigqibo sokuthenga esenziwe.
Makhe sicinge malunga nomzuzu. Oko kuthetha ukuba ngaphambi kokuba naliphi na ithemba likulungele ukuthetha neqela lakho lokuthengisa, bayaphanda, bakhuphele kwaye banxibelelane nomxholo wakho ngandlela thile ukuze benze isigqibo malunga nokuba ungumgqatswa ofanelekileyo. Kukhulu kakhulu!
Enye ingxaki kukuba, nkqu nayo yonke kubahlalutyi kunye nezixhobo ezikhoyo namhlanje, asikafumani ukubonakala ngokupheleleyo kwimizamo yethu kuba indlela yokuguqula ihlala ingacacanga. Ngelixa umntu anokuthi afike akhuphele iphepha lakho elimhlophe, bafika njani apho? Banokubona intengiso kwenye indawo, emva koko bacofe ukuya kwiwebhusayithi yakho, emva koko bakhutshiwe. Kwiiveki ezimbini kamva, bagqiba kwelokuba baqale ukukulandela kwezentlalo. Ke, emva kwenyanga, bagqiba kwelokuba ekugqibeleni bakhuphele enye yamaphepha akho amhlophe. Xa ucinga ukuba beza kwindawo yakho ngokuthe ngqo, inyaniso, bakufumene phantse kwiinyanga ezimbini ezidlulileyo kwintengiso. Ngaba ngekhe kubengcono ukuba unokubonakala kuyo yonke loo ndlela endaweni yokuba bakhuphele iphepha elimhlophe?
Sifuna ukubonakala kwabantu abaza kufika kula maphepha. Sifuna ukubonakala ukuze sikwazi ukwenza izigqibo ezingcono. Kwaye sifuna imbali yamathemba ukuze sikwazi ukuhambelana nomxholo kuwo.
Jonga le infographic yoyikekayo kwiPhephaShare, kwaye uqiniseke ukuba ujonge iimfuno zakho zokuhambisa umxholo!
tags: ilayibrari yomxholoUkuThengiswa kweMpahlazasemoyeniIthala leencwadiAmanani entengisoiphepha lokwabelanaimibonisowhitepapers